Sigstr: အီးမေးလ်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းလှုပ်ရှားမှုများကိုဖန်တီးခြင်း၊ ဖြန့်ကျက်ခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်း။ Martech Zone
သင်၏ inbox ထဲမှပို့လိုက်သောအီးမေးတိုင်းသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၀ န်ထမ်းများ၊ ဖောက်သည်များ၊ အလားအလာများနှင့်ပြည်သူလူထုနှင့်ဆက်သွယ်ရေးပညာရှင်များအကြားနေ့စဉ်သတင်းဆက်သွယ်ရေးအီးမေးလ် ၂၀၀၀၀ ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့သတင်းလွှာကို ၀ န်ဆောင်သူတစ် ဦး သို့ပေးပို့သည်။ လူဖြူများအားစက္ကူဖြူ (သို့) လာမည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုကြော်ငြာရန်အလံထည့်ရန်တောင်းဆိုခြင်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အောင်မြင်မှုနည်းသည်။ လူအများစုကတောင်းဆိုမှုကိုလျစ်လျူရှုကြပြီးအချို့က link ကိုရှုပ်ထွေးစေပြီး၊ call-to-action ကိုအမှန်တကယ်နှိပ်လိုက်မိသောသူများကအစဉ်အမြဲရကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည်အီးမေးလ်လက်မှတ်များသည်အရေးကြီးသည်ဟုမယုံကြည်ပါကအပူထိန်းမြေပုံစစ်ဆေးမှုကိုကြည့်ပါ မျက်လုံး.
ဤသည်အဘယ်မှာရှိ Sigstr ဝင်လာ! Sigstr သည်သင်၏အီးမေးလ်လက်မှတ်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုဗဟိုစီမံခန့်ခွဲသည်။ အသုံးပြုသူများအားလုံးချက်ချင်းမွမ်းမံနိုင်သည်။ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုရုပ်ပုံတင်ခြင်း (သို့) စာသားထည့်ခြင်းဖြင့်တည်ဆောက်နိုင်သည်။ သင်၏ ၀ န်ထမ်းများသည်စည်းမျဉ်းတစ်ခုတည်းကိုတည်းဖြတ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့သည်သူတို့ဆန္ဒရှိသည့်အခါတိုင်းစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုလဲလှယ်နိုင်သည်။
Sigstr သည်မိုဘိုင်းနှင့် desktop များအတွက်အကောင်းဆုံးသောဗားရှင်းများကိုပင်ပြန်ပေးသည်။ နှင့်အညီ, Sigstr ရိုးရှင်းပါသည် analytics စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုကြည့်ရှုသည့်အကြိမ်အရေအတွက်နှင့်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးမှသော်လည်းကောင်းသို့မဟုတ် ၀ န်ထမ်းများ၏နှိပ်ခြင်းအားလည်းကောင်းဖော်ပြရန်!
Sigstr သည်အုပ်စုများကိုလည်းဖန်တီးနိုင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းအသစ်ကမ်းလှမ်းမှုကိုတိုးမြှင့်တဲ့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတခုမှာသင့်ရဲ့ပံ့ပိုးရေးအဖွဲ့ကိုတာဝန်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်အဖွဲ့လိုက်တခုရှိနိုင်တယ်၊ ကော်ပိုရေးရှင်းစုဆောင်းရေးအဖွဲ့ကအလုပ်ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာမှာတာဝန်ပေးအပ်တယ်၊ ပြီးတော့သင့်ရောင်းအားအဖွဲ့ကပြန်လာမှာအဖြူရောင်စက္ကူဖြန့်ဝေနေတယ်။ သင်၏ဖြေရှင်းချက်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်!
၎င်းသည်အသုံးပြုသူများအားအုပ်စုများထဲသို့ထည့်သွင်းရန်ခွင့်ပြုပေးပြီးနောက်အုပ်စုတစ်ခုစီကိုသီးခြားစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတစ်ခုတွင်ထပ်ထည့်နိုင်သည်။ ငါအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ် Sigstr ငါတို့ချက်ချင်းလက်ငင်းစာရင်းသွင်းလိုက်တယ်၊ ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ ၀ န်ထမ်းတွေကိုဖြတ်ပြီးစီမံခန့်ခွဲဖို့စိတ်ကူးပဲ။
Sigstr အီးမေးလ် Signature ပေါင်းစည်းမှု
Active Directory၊ Outlook, Exchange, Office 365, Google Suite, Gmail နှင့် Apple Mail တို့နှင့်ပေါင်းစည်းထားသည့်အတွက် Sigstr ကိုမည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဆိုလွယ်ကူစွာဖြန့်ကျက်နိုင်သည်။
အက်ဥပဒေ - သင်၏အက်စ် - အီးမေးလ်ဆက်သွယ်ရေးတွင် Sigstr လက်မှတ်နှင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့် Act-On အတွင်းသင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားထုတ်မှုကိုတိုးမြှင့်ပါ။
HubSpot - Sigstr တွင်လည်းပေါင်းစည်းမှုရှိသည် HubSpot ဘယ်မှာသင်မည်သည့်ထပ်တူပြုနိုင်သည် HubSpot Smart List နှင့်၎င်းကိုတိကျသော Sigstr ABM စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတွင်သတ်မှတ်ပါ HubSpot သူတို့ကနှိပ်သောအခါ, auto-create HubSpot ဘယ်သူတွေကိုအီးမေးလ်ပို့တယ်ဆိုတာကိုအခြေခံပြီးအဆက်အသွယ်တွေနဲ့တက်ကြွနေတဲ့အီးမေးလ်လက်မှတ်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုတွေကိုသုံးပါ HubSpot လုပ်ငန်းအသွားအလာ!
Marketo - သင်၏လက်မှတ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကို Marketo Smart Lists နှင့် Landing Pages နှင့်ညှိပါ။ Signo များကို Marketo အီးမေးလ်တင်းပလိတ်များနှင့်လည်းပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
Salesforce - အရောင်းမြှင့်တင်ရေးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများနှင့်အစီရင်ခံစာများနှင့်သင်၏လက်မှတ်စျေးကွက်ကိုချိန်ညှိပါ။ လက်မှတ်ပေါင်း VisualForce တင်းပလိတ်များနှင့်လည်းပေါင်းစည်းနိုင်သည်။
SalesLoft - သင်၏ Cadence အီးမေးလ်ဆက်သွယ်ရေးတွင် Sigstr လက်မှတ်နှင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုသုံးနိုင်သည်
တောင်းပန်ပါတယ် - သင်၏လက်မှတ်စျေးကွက်ကို Pardot လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အစီရင်ခံစာများနှင့်ညှိပါ။ လက်မှတ်များကို Pardot အီးမေးလ်တင်းပလိတ်များနှင့်လည်းပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
Sigstr Demo တောင်းခံပါ
Tags: အက်ဥပဒေ-တွင်Actonacton အီးမေးလ်လက်မှတ်ပေါင်းနဖူးစည်းစာတမ်းတွေအီးမေးလ်ကလှုပ်ရှားမှုများအီးမေးလ်ကလက်မှတ်အီးမေးလ်လက်မှတ်ပေါင်းမျက်စိခြေရာခံလွိုင်ကော်hubspot ဖြစ်သည်hubspot အီးမေးလ်လက်မှတ်ပေါင်းစျေးကြီးစျေးကွက်အီးမေးလ်လက်မှတ်ပေါင်းခွင့်လွတ်အီးမေးလ်လက်မှတ်များခွင့်လွတ်ပါsalesforce အီးမေးလ်လက်မှတ်ပေါင်းလက်မှတ်sigstr